Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/andrasana
Proverb 301 Amboalahy miandry embok' akondro : andrasana tsy latsaka , ilaozana toa hena . [Rajemisa 1985 #62, Abinal 1888]
Proverb 354 Ampamosavy tampodiam-paty nandrazana : tsy vañon-draha nanina ka nody. [Houlder 1895]
Proverb 457 Andrasan' amboa ohatra ny varavaran' ny mpitrosa . [Rinara 1974 #216]
Proverb 1672 Bibilava vonoina , ka tsy tongotra hitsipaka , tsy tanana handrangotra , tsy vava hiteny, fa todin' aina no andrasana . [Rinara 1974]
Bibilava vonono : tsy manan-tanana hamaly izy, fa Andriamanitra no andrasana . [Veyrières 1913 #22]
Bibilava vonono : tsy manan-tanan-kamaly , tsy manan-tongotra hitsipaka , tsy manam-bava hivalo, fa todin' aina no andrasana . [Veyrières 1913 #22, Cousins 1871 #769]
Bibilava vonono , tsy tanana hamely, tsy tongotra hitsipaka fa Andriamanitra no andrasana . [Rajemisa 1985]
Bibilava vonono : tsy tanan-kandrangotra na tongotra hitsipaka , fa Andriamanitra no andrasana . [Rajemisa 1985]
Bibilava vonono : tsy tongotra hitsipaka , tsy tanana handrangotra , fa Andriamanitra no andrasana . [Rajemisa 1985]
Proverb 2308 Harongam-pohatra ny momba; milevin' ila fa tsy lo ny miteraka , andrasan' amboa varavarana ny amboalambo , ary mandry be tsy matory ny mpitrosa . [Rinara 1974]
Proverb 3534 Manao andevolahy miandry faty : ny hena no andrasany eo, tsy mba ny faty no andrasana . [Veyrières 1913 #563]
Proverb 4586 Mpamosavy tampodiam-paty nandrazana : tsy vanon-draha nano ka nody. [Samson 1965 #M134]
Proverb 5899 Osilahy sarotra andrasana . [Veyrières 1913 #5671]
Proverb 6720 Tahaka ilay nihinana aviavy , ka ny farany no andrasana . [Rinara 1974 #3971]
Tahaka ilay nihinana aviavy : ny farany no andrasana . [Houlder 1895 #1146, Cousins 1871 #2955]
Proverb 7102 Toy ny akotralahy : mibaby ny omby nohaniny , ka taitry ny ondry nandrasany , miloloha ny akoho nompiany . [Rinara 1974]
Toy ny ankotralahy : mibaby ny omby nohaniny , ka taitra ny ondry nandrasany , ary miloloha ny akoho nompiany . [Cousins 1871 #3183]
Toy ny ankotralahy : mibaby ny omby nohaniny , ka taitry ny ondry nandrasany , ary miloloha ny akoho nompiany . [Veyrières 1913 #460]
Proverb 7226 Tolo-kena alina : vintana no andrasana . [Veyrières 1913 #3217]
Proverb 7425 Tsy ampahafirin' ny omby nandrasana , ka hidingin-drambo mifatotra . [Rinara 1974 #4475]
Proverb 7594 Tsy mba ny avy andrasana , fa ny vonon-kalaina . [Rinara 1974 #293]
Tsy mba ny tsy avy handrasana , fa ny vonon-kalaina . [Houlder 1895 #1354]